Maraykanka, 01 June 2018
Mareykanka iyo Korea-da Waqooyi oo isku soo dhawaanaya
Xiriirka Mareykanka iyo Pakistan oo sii xumaanaya
Pakistan ayaa sheegtay inay dib u qiimeyneyso xiriirka xun ee kala dhaxeeya Mareykanka, tallaabadaas oo ah mid hoggaamin karta inay jarto waddooyinkaa ciidamada Mareykanka ay agabka u marsiistaan dalka Afghanistan ee dalkeeda ka baxa.
Duufaan Garaacday Xeebaha Florida
Duufaanta loogu magac daray Alberto, oo ah tii ugu horreysay ee sannadkaan 2018 ka dhacdo Mareykanka, ayaa Isniinti shalay garaacday xeebta Laguna ee gobolka Florida.
Trump oo joojiyey kulankii Kim Jong Un
Barack iyo Michelle Obama oo heshiis la galay Netflix
Barack iyo Michelle Obama ayaa ku biiraya ganacsiga taleefishinka, ayaga oo Isniintii ku dhwaaqay inay heshiis sanado badan la galeen shirkadda Netflix, ee muuqaallada ku baahisa Online-ka.
Amiir Harry iyo Meghan Markle oo Is-guursaday
Wiilka ay ayeeyada u tahay boqoradda Ingiriiska, Queen Elizebath, Prince Harry ayaa guursaday, Meghan Markle oo u dhalatay Mareykanka.
Dad badan oo ku dhintay toogasho ka dhacday Texas
Ugu yaraan sideed ruux ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen kadib marki uu qof hubeysani rasaas ku furay Jimcihi maanta dusgi sare oo ku yaalla gobolka Texas ee dalkaan Mareykanka.
Kulanka Trump iyo Kim oo weli laga shaqeynayo
Dowladda Kuuriyada Koofureed ayaa riixeysa sidii uu u qabsoomi lahaa kulanka la qorsheeyay inuu bisha soo socota dalka Singapore ku dhexmaro madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un.
Wareysi: Xaaladda Dhalinyarada Soomaalida Maraykanka
Dhageyso wareysiga Xamza Cabdisalam Shabeel oo ka mid ah hogaamiyeyaasha ardayda Soomaalida ee dalka Maraykanka oo ka hadlaya caqabadaha haysta dhalinyarada Soomaalida ee dalka Maraykanka ku nool iyo sidii looga gudbi lahaa
Kulankii Trump iyo Kim Jong Un oo uu shaki soo galay
Hanjabaadda deg degga ah ee Korea-da Waqooyi ay ku sheegtay inay ka baxeyso wada-hadallo la qorsheeyey inay Mareykanka la yeelato, ayaa shaki geliyey suurto-galnimada heshiis hubka Nuclear-ka looga dhigayo dalkaas.
Safaaradda Mareykanka oo si rasmi ah looga furay Qudus
Dowladd Mareykanka ayaa si rasmi ah safaaraddeda uga soo rartay magaalada Tel Aviv, una guurisay magaalada Qudus maanta, in kasta oo 37 Falastiiniyiin ah lagu dilay, boqolaal kalena lagu dhaawacay rabshado ka dhacay xadka Gaza.
Minneapolis: Dhalinyarada Xirfadlayaasha oo Kulmay
Magaalada Mineaplis ee gobolka Minosota ayaa waxaa xalay lagu qabtay kulan ay isugu yimaadeen urur ay leeyihiin dhallinyarada soomaaliyeed ee xirfadlayaasha ah oo lagu magacaabo Isutagga Soomaalida Mareykanka ee gacansiga iyo xirfadleyaasha